Home » Industry » UN launches new Zimbabwe appeal as millions face food crisis
HARARE, The UN food agency launched a $331-million appeal for aid donations to feed millions of people in crisis-hit Zimbabwe, which is reeling from a drought and the high cost of food.
Around five million people, or a third of the 16 million Zimbabweans, are in need of aid and at least half of them are on the cusp of starvation, according to the World Food Programme (WFP).
Speaking at the launch of the appeal, WFP executive director David Beasley said 2.5 million Zimbabweans were in crisis emergency mode marching towards starvation.
The cyclone, which also affected parts of Malawi and Mozambique, affected 570,000 Zimbabweans and displaced some 50,000 of them.
August 7, 2019 Web Desk Industry Comments Off on UN launches new Zimbabwe appeal as millions face food crisis